I-UP200H / UP200S - Amandla we-Ultrasonic weLabh - Hielscher Ultrasound Technology
Idivayisi yama-lab ultrasonic UP200H (200W, 24kHz) ne-UP200S (200W, 24kHz) ifaneleka kuzo zonke izinhlelo zokusebenza ezijwayelekile ze-ultrasonic ngezinga elincane naphakathi. Izinhlelo zokusebenza zihlanganisa: Ukuqothulwa kwamakhemikhali, ukuhlakazeka, ukuxuba, ukuphazanyiswa kwamaseli, degassing noma sonochemistry.
Ukukhiqizwa kwale miboni ye-ultrasonicators engu-200W sekuye kwashiywa futhi kufakwe esikhundleni sezinhlobo ze-digital UP200Ht futhi UP200St. Sicela uvakashele ikhasi le UP200Ht futhi UP200St ngolwazi lwamanje kakhulu.
Yiqiniso, sisesekeza i-sonotrodes, izesekeli nezinsizakalo zazo zonke izinhlobo!
I-Handheld noma Yima-iphakanyisiwe i-homogenizer? Uma impendulo yakho kulo mbuzo ingukuthi “Ngifuna kokubili!”, i-UP200H (isithombe esingakwesobunxele ngezansi) yisisetshenziswa sokuzikhethela. Uma udinga i-homogenizer ene-stand kuphela noma uma ngokuvamile ugijimela izilingo ebhokisini lokuvikelwa komsindo, i-UP200S (isithombe esifanele ngezansi) yile divayisi ezwakalayo.
I-UP200H nge-sonotrode S7
UP200H – I-Handheld noma i-Stand-Mounted
Iprosesa ye-ultrasonic UP200H (Ama-watts angu-200, 24kHz) inamandla kakhulu I-Handheld idivaysi, kodwa ingafakwa ku-stand, futhi. Umklamo ohamba phambili ovulekile wawuvuzwa ngokuziwa kahle “Umklomelo Womklami Wezwe Lonke” yi-iF (Industry Forum Design Hannover). Kusukela ngaleso sikhathi le divayisi iyi-flagship yamadivayisi we-laboratory we-compact.
UP200S nge-sonotrode S14
UP200S – Yima-iphakanyisiwe
Iprosesa ye-ultrasonic UP200S (Ama-watts angu-200, I-24kHz) ihluke ku-UP200H kuphela esimweni sayo futhi ingasetshenziswa esiteji noma ebhokisini lokuvikelwa komsindo, kuphela. Yisinqumo sokuqala sebhobhothri yakho, uma kungekho okusebenzayo okudingekayo. Ukusebenza nemingcele kufana nalokhu ku-UP200H.
I-UP200H nge-sonotrode S14
Kokubili amadivayisi ultrasonic – i-UP200H ne-UP200S – iphumelela kakhulu ku I-homogenizing, Ukuhlakazeka, Emulsifying, Ukukhipha futhi i-degassing noma ku ukuphazamiseka kwamaseli . Zingasetshenziswa ukunika amandla, ukuthuthukisa noma ukusheshisa ukusabela kwamakhemikhali (sonochemistry), futhi.
Ngokujwayelekile, i-UP200H ne-UP200S isetshenziselwa ukunikezwa kwezampula zesampula kusukela 0.1 kuya ku-2000mL. Sinikeza i-sonotrodes kusuka ku-1 kuya ku-40mm engasetshenziselwa noma iyiphi yamadivayisi. I-sonotrode engama-40mm idlulisa i-ultrasound ngokushelela phansi endaweni enkulu kakhulu futhi ngakho-ke kufanelekile ukusekela i-degassing noma ukuhlanza izinqubo. I-sonotrodes encane isebenza kuma-amplitudes aphakeme nangaphezulu, isib. I-UP200H ne-UP200S nayo isetshenziselwa ukukhiqizwa kwamanani amancane, ikakhulukazi ekugezeni okuqhubekayo nokusetshenziswa kwamaseli okugeleza kanye ne-sonotrodes efanelekile. Kuhlangene no I-Flow Cell D14K ungakwazi ukunikeza izinto ngaphakathi ukugeleza okuqhubekayo, isib 20 kuya ku-200mL ngomzuzu. Ngalokhu, ungakwazi ukulinganisa izinqubo eziqhubekayo ze-sonication ngesilinganiso esincane kakhulu. Zombili amadivaysi angaqhutshwa amahora angu-24 ngosuku (24h / 7d), okuvumela ukucubungula kube ngu-180L ngosuku (kuye ngokuthi isicelo).
Njengamanye amadivayisi we-laboratory, njenge- UP50H futhi i UP100H, i-UP200H ne-UP200S ingasetshenziselwa ukunikezwa kwe-sampuli ngokungaqondile, futhi. Ngenxa yalokhu i-sonotrode igxila kuba beaker sonication, isb. BB1-16 (isithombe esifanele), idlulisela ukukhipha emanzini e-distilled, aboniswa nge-titanium cone bese ehanjiswa emathysini wokuhlola nesampula.
Uhlu olubanzi lwezesekeli luyatholakala ku-UP200H naku-UP200S. Lokhu kubandakanya amaseli okugeleza, ukuma, ibhokisi lokuvikela umsindo, isikhathi se-PC kanye ne-PC-interface. I I-PC-Interface kusiza ukurekhodwa kwezivivinyo ngezinhloso noma izinjongo zokulungiselela.
I-Ultrasonic Processor UP200H
for operation ephathekayo noma ukusetshenziswa stand, Ama-watts angu-200, imvamisa ye-ultrasonic 24kHz, uhlelo lwe-frequency tuning system, i-amplitude eguqulwa kusuka ku-20 kuya ku-100%, i-pulse eguquguqukayo kusuka ku-0 kuya ku-100%, ukusebenza okumile okuvikelwe, ne-9-pin ye-DSUB interface, kwimeko ephathekayo, ukuze isetshenziswe nge-stand ST1-16 noma ibhokisi lokuvikela umsindo SB3-16, ngamathuluzi aphakanyisiwe, i-IP40 ibanga, i-titanium uphondo nentambo yabesifazane i-M8x1
ubukhulu (LxWxH): 275x200x160mm, isisindo: 2.1kg
iprosesa ye-ultrasonic UP200S
sokusebenza okumeziwe, Ama-watts angu-200, imvamisa ye-ultrasonic 24kHz, uhlelo lwe-frequency tuning system, i-amplitude eguqulwa kusuka ku-20 kuya ku-100%, i-pulse eguquguqukayo kusuka ku-0 kuya ku-100%, ukusebenza okumile okuvikelwe, ne-9-pin ye-DSUB interface, kwimeko ephathekayo, ukuze isetshenziswe nge-stand ST1-16 noma ibhokisi lokuvikela umsindo SB1-16, ngamathuluzi aphakanyisiwe, i-IP40 ibanga, uphondo lwe-titanium nentambo yezinsikazi ze-M8x1 (LxWxH): 290x210x100mm, isisindo: 2.3kg
eyenziwe nge-titanium, ububanzi bephoyinti 1mm, cishe. ubude be-100mm, intambo yamadoda engu-M8x1, ngamasampula kusuka ku-0.1ml kuze ku-5ml
eyenziwe nge-titanium, ububanzi bephoyinti 2mm, cishe. ubude be-100mm, intambo yesilisa engu-M8x1, ngamasampuli avela ku-2ml kuya ku-50ml
eyenziwe nge-titanium, ububanzi bephoyinti 3mm, cishe. ubude be-100mm, intambo yamadoda engu-M8x1, ngamasampuli kusuka ku-5ml kuya ku-200ml
eyenziwe nge-titanium, ububanzi bephoyinti 7mm, cishe. ubude be-100mm, intambo yesilisa engu-M8x1, ngamasampuli kusuka ku-20ml kuya ku-500ml
eyenziwe nge-titanium, ububanzi bephoyinti 14mm, cishe. ubude be-100mm, intambo yamadoda engu-M8x1, ngamasampuli kusuka ku-50ml kuze kufike ku-1000ml
eyenziwe nge-titanium, ububanzi bephoyinti 14mm, cishe. ubude be-100mm, intambo yamadoda engu-M8x1, ne-seal yezinhlelo ezivaliwe
eyenziwe nge-titanium, ububanzi bephoyinti 14mm, cishe. ubude obungama-200mm, intambo yowesilisa engu-M8x1, enophawu lwamasistimu avaliwe
eyenziwe nge-titanium, ububanzi 40mm, cishe. ubude be-100mm, intambo yamadoda engu-M8x1, ngamasampuli kusuka ku-100ml kuze kufike ku-1000ml
I-Flow Cell D14K
eyenziwe ngensimbi engenalutho, nge-cooling, izixhumi ze-hose, ezitshalisayo, ezizenzekelayo, ngokusebenza nge-sonotrode S14D, ivolumu cishe. 15ml, ene-adapter yokuma ye-stand ST1-16 (ububanzi buka-16mm)
I-Flow Cell GD14K
okwenziwe ngilazi, ngokuzipholisa, ukuxhumeka kwe-hose, oketshezi, okuzenzekelayo, ukusebenza nge-sonotrode S14D (noma nge-sonotrode S14L2D ngokuhambisana ne-adapter ye-flask NSA2), ivolumu cishe. 75ml, nge-clamp yokufakwa endaweni yokuma, isib. Ume ST1-16 (ububanzi 16mm)
I-Adapter ye-Flask NSA2
for standard flask-neck, adjustable adjustable, efanelekayo sonotrode S14L2D ngokuhambisana flow flow cell GD14K
netafula eliguquguqukayo elilinganiselwe kanye nobubanzi be-16mm yokuma, yokusetshenziswa namadivayisi UP200S noma UP400S
Ibhokisi lokuvikela umsindo SB3-16
ngetafula eliguquguqukayo elilinganiselwe nobubanzi be-16mm ibha yokuma, ukuze isebenziswe ngedivayisi UP200H
I-UP200S nge-tipson ye-ultrasonic ekume
Idivayisi ye-ultrasonic i-UP200S ifika ecaleni eliphathekayo.